२६ कार्तिक - ‘एमाले–माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन बनेको छ। त्यसले चुनौती अवस्य थपेको छ। तर कांग्रेस कमजोर छैन। धेरै पटक एक्लै चुनाव लड्दा पनि जितेका छौं। यो पटक पनि जित्छौं।’
२८ कार्तिक - पौडेल २६ वर्षपछि पुरानै निर्वाचन तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ मा फर्किएका छन्। एमाले र माओवादी केन्द्रको वामगठबन्धनले कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई पौडेलविरुद्ध उठाएको छ। तर, पौडेल भने सधै तनहुँमा कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्दै आएकाले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको बताउँछन्।
२७ कार्तिक - दुई वटा दलको मत जोड्यौं भने त हामी जितिहाल्छौं भन्ने उहाँहरुलाई होला। मतदताको कुरा हो। त्यो, एक मतले पनि हुन सक्छ, एक हजार मतले पनि हुनसक्छ, पाँच हजार मतले पनि हुनसक्छ। तर, मतदाताको मन हामीले तुलनात्मक रुपले अलि बढी जितेका छौं भन्ने लाग्छ। त्यसैले...
२७ कार्तिक - राम कार्की झापा–१ बाट प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रका प्रतिस्पर्धी हुन्। वामगठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका उनको प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मासँग हुँदैछ। कार्कीसँग नेपालखबरका लागि मनोज खतिवडाले गरेको चुनाव–वार्ताः
२३ कार्तिक - आमनिर्वाचन २०७४ को अर्को ‘हटस्पट’ हो, ललितपुर–१, जहाँ फरक पेशागत र पारिवारिक पृष्ठभूमिका दुई चर्चित पात्र चुनावी मैदानमा छन्। एक हुन्, नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकका दावेदार भएपनि प्रहरी प्रमुख बन्ने अवसरबाट वञ्चित पूर्व डिआईजी नवराज सिलवाल।...
२३ कार्तिक - आमनिर्वाचन २०७४ को अर्को ‘हटस्पट’ हो, ललितपुर–१, जहाँ फरक पेशागत र पारिवारिक पृष्ठभूमिका दुई चर्चित पात्र चुनावी मैदानमा छन्। एक हुन्, कांग्रेसका युवा नेता उदय शमशेर राणा, जो वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा अर्थराज्यमन्त्री छन्। उनी अन्तिम राणा...
‘चुनावपछि थर्ड पावर निर्माण गर्दैछौं’
१९ कार्तिक - ‘चुनावी तालमेल हुन नसक्नुको मुख्य कारण कांग्रेस नै हो। कांग्रेसका नेताहरुले लोकतान्त्रिक गठबन्धनको ठूला कुरा त गर्नुभयो। तर व्यवहारमा उदारता भने देखाउन सक्नुभएन।तर तालमेल हुन नसकेपछि आरोप चाहिँ हामीमाथि लगाउँदै हिँड्नुभएको छ।’
‘पहिलेका चुनावमा जनकपुर कांग्रेसमय हुन्थ्यो, अहिले मधेसमय छ’
१८ कार्तिक - राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि धनुषा–३ बाट नेपाली प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।
चितवनमा प्रचण्डले ९-१० हजार मतान्तरले जित्नुहुन्छ: देवी ज्ञवाली
९ कार्तिक - ‘हिजो एमालेविरुद्ध माओवादी केन्द्रलाई कांग्रेसले हतियार बनाउन खोज्यो। तर त्यो हतियार अहिले हामीले खोसेका छौँ। अहिले माओवादी केन्द्र हाम्रो सहयोगी बनेको छ। यो कुरा हाम्रा कार्यकर्ताले बुझेका छन् र प्रचण्डजीको पक्षमा मतदान गर्छन्।’
६ कार्तिक - नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराई र एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनबाट नारायणकाजी श्रेष्ठले उम्मेदवारी दार्ता गराएपछि गोरखा २ अहिले चर्चाको शीखरमा छ। दुई प्रमुख नेताको प्रतिस्पर्धाले गर्दा सम्भवतः गोरखा २ यो...
३ कार्तिक - यही महाधिवेसनमा सीले आफ्नो उत्तराधिकारी नतोक्न पनि सक्छन्। ५०–५० सम्भावना छ। मलाई लाग्छ, सीको उत्तराधिकारी हुने सबैभन्दा बढी सम्भावना भएका व्यक्ति ग्वाङदोङ पार्टी सचिव हु चुनहुआ हुन्। तर उत्तराधिकारी दाबी गर्ने अन्य केही उम्मेदवार पनि छन्।...
२५ असोज - ओली झापा आन्दोलनलाई समेत गलत भन्छन्। उनले जनयुद्धलाई लालसलाम भनेर अघि जालान् कि नजालान्? जबजलाई छाड्दै नछाड्ने ओली एक्काइसौं सताब्दीको जनवादमा आउँछन् कि आउँदैनन्? एमाले–माओवादी एकतामा यी अत्यन्त जटिल वैचारिक सवाल हुन्।
‘दुई तिहाई ल्याउने भनेको सत्ता कब्जा नै हो’
२२ असोज - वाम गठजोडले दुई तिहाई ल्याउने भनेको सत्ता कब्जा गर्ने नै हो। यो समूहले कब्जामा लियो भने गणतन्त्र चाहिं उल्टिँदैन। किनभने राजतन्त्र फालेपछि क्षेत्रीबाट शासन बाहुनको हातमा गएको छ।
‘एकतापछि हाम्रो काम मध्यस्थकर्ताको हुन्छ’
२२ असोज - यो एकता भारत र चीनलाई हेरेर गरेका होइनौं। हाम्रो मुलुकको हितका लागि यो एकता गरेका हौं। तर कुनै शक्तिले यो एकतालाई आफू विरुद्ध छ भनेर कुनै कदम चाल्यो भने परिस्थिति फेरि हाम्रो काबुभित्र रहँदैन। हाम्रो अपेक्षा छ, सबै मित्रहरुले यो एकता संविधान...
‘माओवादीसँग एकताबारे ओलीले सोधे, मैले अघि बढिहाल्न भनें’
२० असोज - एमाले ठूलो पार्टी भएकाले अध्यक्ष ओली प्रमुख नेता हुनुहुने भयो। माओवादी दोस्रो ठूलो पार्टी भएकाले त्यसपछि प्रचण्ड हुनुहुने भयो। अहिले हामीले उहाँहरुलाई प्रमुख नेता भनेर तय पनि गरेका छौं। यदि नयाँ नेतृत्व आउँछ र उछिन्छ भने उछिनोस्, त्यसलाई म...
‘एमालेसँग अहिले चुनावी तालमेल, पछि पार्टी एकता’
१६ असोज - माओवादी केन्द्रले एकता संयोजन समिति बनाएको छ। के कसरी जाने भन्ने सम्बन्धमा अब छलफल सुरु हुन्छ। मंगलबार दिनभरि हामी एकताका लागि घनिभूत रुपमा कुराकानी गर्नैछौं र छिट्टै निष्कर्षमा पनि पुग्नेछौं। सम्भवतः तत्कालका लागि चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय...
१३ असोज - सामाजिकता परिवर्तन हुँदै जान्छ तर दशैं नामेट नै चाहीँ हुँदैन। दशैं जसरी शुरु भएपनि, इतिहासमा यसले जसरी राजीतिक र धार्मिक स्वरुप लिँदै यहाँसम्म आइपुगे पनि विस्तारै यो पर्वले ‘पब्लिक होलिडे’ को स्वरुप ग्रहण गर्दै गइरहेको छ।
‘अब दिल्लीले नाक खुम्च्याउँदैन’
५ असोज - भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय दिल्लीमा कुटनीतिको दोस्रो ‘इनिङ’मा छन्। अघिल्लो पटक उनलाई केपी ओली सरकारले फिर्ता बोलाएपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले दोस्रो पटक दिल्ली पठायो। कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य र पूर्वमन्त्री पनि...
‘मलाई एनआरएनएको अध्यक्ष हुने अवसर मिल्दैछ’
२३ भदौ - ‘एनआरएनएलाई म सही दिशा दिन सक्छु। एनआरएनएको नेतृत्व लिएपछि देश विकासमा यो संस्थालाई केन्द्रित गर्न कुनै भूमिका बाँकी राख्ने छैन। सबै साथीभाईको भावना अनुकूल म हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नेछु। मलाई विश्वास छ, यसपटक मुख्य नेतृत्व अर्थात् एनआरएनएको...
‘हाम्रो प्रतिस्पर्धा कांग्रेससँग मात्रै हो’
२३ भदौ - संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर नेकपा एमाले जो अत्यन्तै कठोर रुपबाट प्रस्तुत भयो। एकथरीको राष्ट्रवादलाई राष्ट्रियतासँग जोड्न पुग्यो। जसले वास्तवमा सामाजिक सद्भावलाई एकजुट पार्ने भन्दा पनि खण्डित पार्ने काम गर्यो।
‘नेपालका सबै सरकारले चीन विरोधी गतिविधि अस्वीकार गरेका छन्’
१५ भदौ - चीनले नेपाल नीति बनाउँदा कुन दल वा कसको सरकार छ भनेर भनेको सुनिँदैन। कम्युनिष्ट मुलुक भएर पनि चीनले नेपाली काँग्रेससँग पनि राम्रो सम्बन्ध बनाएको छ।
‘देउवा–मोदी एक्लाएक्लै भेटमा पञ्चेश्वरको विषयमा कुरा भएको रहेछ’
९ भदौ - समग्रमा देउवाको भारत भ्रमणको उपलब्धी कस्तो रह्यो त? दिल्लीमा नेपालखबरका चन्द्रलाल गिरीले उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई शुक्रबार बिहानै यो प्रश्न राखेका थिए। पढौँ महराको जवाफः
‘देउवाको भारत भ्रमणमा दोक्लम मुख्य एजेण्डा बन्नेछ’
२ भदौ - देउवाको भ्रमणको क्रममा दोक्लमको विषय पनि संयुक्त वक्तव्यमा राख्ने भारतको इच्छा हुनसक्छ। तर नेपालका प्रधानमन्त्रीले म यो विषयमा बलियो प्रतिबद्धता जनाउन सक्दिनँ, चिनियाँहरु रिसाउँछन् भन्छन् भने पनि निकासको बाटो भेटिनेछ।
१ भदौ - नयाँ शक्ति नेपालका सहसंयोजक देवेन्द्र पौडेलसहित झण्डै डेढ दर्जन नेताहरु संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन्। यतिसम्म कि, उनीहरु नयाँ शक्ति छोडेर माओवादी केन्द्र जाने चर्चा चलिरहेकै छ। पौडेलसहित १५ जना नेताहरुले हालै गरेको...
‘एमालेको विश्लेषणः प्रत्यक्षमा दुई तिहाइ, समग्रमा बहुमत’
५ साउन - आउने दिनमा नेपाली राजनीतिमा दुई धारबीच टक्कर हुने देख्छु म। एउटा पुँजीवादी धार, जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्छ र अर्को समाजवादी धार, जसको नेतृत्व एमालेले गर्छ। यो दुई धारलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर धु्रवीकरण सुरू हुन्छ। त्यस हिसाबले हाम्रो धारलाई...
‘कांग्रेसलाई खतराको घण्टी बजेको छ, अब सम्हालिन्छ’
२३ असार - देशभरी निर्वाचान तयारी हुँदा पनि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेन। कांग्रेसको ‘इलेक्सन न्यारेटिभ’ नै थिएन। कार्यकर्तालाई पार्टीको लाइन के हो भन्ने पनि थाहा थिएन। कांग्रेस आफैले आफु के हो भन्न सकेको छैन। कांग्रेस के हो भनेर भन्ने जिम्मा पनि...
३ असार - हाम्रा माग पूरा भएनन् भने हामी किन निर्वाचनमा सहभागी हुने? माग पूरा भएन भने यो असोज २ गते होइन, अर्को वर्षको असोज २ मा चुनाव गराएपनि हामीले भाग लिन्नौं। माग पूरा नगरे कसरी सहभागी हुने? आफ्नो मूल्य मान्यता र माग पूरा नभएपछि निर्वाचनमा नजाने...
'विकास पक्षमा निर्मम भएर निर्णय गर्छौं'
१२ जेठ - नेकपा एमालेका मानबहादुर जिसी पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको मेयर पदमा चुनिएका छन्। उनका निकटम् प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका रामजी कुँवर थिए, जो करिब १४ हजार मतको फरकमा पछि परे। विजयी घोषणा भएसँगै जिसीले भने, ‘स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भयो, वैरभाव...
१ जेठ - चीनले स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकस्तर उन्नति गर्न १६ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ। भूकम्प पुनर्निमार्णसँग जोडेर यो सहयोग गरिएको हो। दोस्रो क्रस बोर्डर इकोनोमिक कोअपरेसनमा हस्ताक्षर भएको छ।
‘सिंहदरबार साह्रै सङ्कीर्ण थियो’
२४ बैशाख - गाउँ र नगरहरूको विकासबारे सिंहदरबारको दृष्टिकोण साह्रै संकीर्ण र सामन्तवादी भएको हुँदा स्थानीय जनताले आ–आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको अभ्यासको अनुभव नभएको कारण सुरूमा केही अराजकता, पक्षपात र अनेक प्रकारका अनियमितता देखा पर्नेछ। संयम, छलफल र अनुभवले...